२०७१ पुस २० गते, आईतवार ०७:४८:४८ बजे
खाली आश मात्र गरिरहन्छु
कहिले छिमेकीले फाल्छन् कि भनी
कहिले छिमेकीको छिमेकीले टिठ्ठाउँछन् कि भनी
२०७१ पुस २० गते, आईतवार ०७:४६:२७ बजे
यो केटीलाई जवानीका दिनमा भेटेको हुं। सहपाठी थिइ। नजिकको मेचमा वस्दावस्दै कुनवेला दिलमा छिरिछे पत्तै पाइन। हाम्रो पढाइ हुन्जेल लिभिङ् टुगेदरमा वस्यौ। सुरुमा हाम्रो सहयात्रा कति अगाडि जान्छ भनेर मैले पनि सोधिन। उसले पनि चासो गरिन। अधिकांस अमेरिकी केटीहरु एकैपटक विवाहको वारेमा सोचिहाल्दैनन जस्तो लाग्छ। व्वाइ फ्रेन्ड र ग्रल फ्रेन्डको रुपमा संगै वस्यो, पछि उचित लाग्यो भने विवाह गर्‍यो, नलागे छुट्टियो भन्ने उनीहरुको मान्यता वसीसकेको छ।
२०७१ पुस २० गते, आईतवार ०७:४४:३९ बजे नेपालको राजनीतिक बजारमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको चर्चा हिजोआज निकै चुलिएको छ जसरी छत्तीस सालताका सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको चर्चा चुलिएको थियो| प्रस्तावित सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा के के सुधार हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्यौल नै रहेकोले सम्भावित केही ‘सुधार’हरू पाठकवृन्द समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु।
२०७१ पुस १९ गते, शनिवार १०:१६:३७ बजे
यौवनको प्यासमा लिप्त
आफ्नो प्रेमको तृष्णा मेट्न
सम्साझै एक युगल जोडी
हुर्रिन्छन् हाइवेबाट थोरै पर
सानो जंगल सानो कटेर
अनि त्यो अव्यवस्थित प्रेम।
२०७१ पुस १९ गते, शनिवार १०:१४:५३ बजे
भीडमभीड फुटपाथमा हिँड्दै, दाँतले जिब्रोको टुप्पो थिच्दै
पिचिक्क थुक्यो पिचकारी, “के गर्नु? सरकारै खत्तम छ!”
अफिस मेचमा बसेर, नाकमा औँला कोचेर
झिकेर केही नाकबाट मेचमुनि त्यो पोतेर–
“के गर्नु? सरकारै खत्तम छ!”
२०७१ पुस १९ गते, शनिवार १०:१३:३५ बजे
खै यसपाली पनि संविधाननबन्ला जस्तो छ
देसले संविधान पायो भने
२०७१ मंसिर २२ गते, सोमवार ०७:४९:४२ बजेम अछुतो छु तिमीले मलाई छुन नहुने बनाएको छौँ । घिन लाग्छ मलाई आज मानवताको गल्लीमा उभेर बाँच्नलाइर्, अनि लाज लाग्छ मानवताको त्यो रुप देखेर । समाज, साथीभाईको नजरमा त गिराउनु गिरायौ, घर परिवारको नजरमा पनि तिमीले मलाई नै दोषी ठह¥याइदियौँ । आखिर मैले तिम्रो के बिगार गरेको थिए र ? म त सधैँ तिम्रै प्रगतीनै प्रगतीको मात्र कामना गरिरहेकी थिए, हरेक पलमा, पाइला पाइलामा तिम्रो नै सफलता चाहन्थे ।
२०७१ मंसिर १३ गते, शनिवार १७:०८:१३ बजे बूढानीलकण्ठनजिकै भर्खरै खुलेको पार्कभिलेज होटेलको विशेष क्याबिनमा एउटी युवतीसँग शारीरिक प्रेमालाप गरेर निस्केपछि युवराज निकै फ्रेस देखिन्थे, एकछिन अघिसम्मको मानसिक तनाव निकै टाढा पुगेजस्तो । साधना गरेर बाहिरिएको साधुको जस्तो धप्प बलेको अनुहार देख्दा लाग्थ्यो, उनीभित्र कुनै मानसिक तनाव छ र ! युवराजले पार्किङबाट प्राडो गाडी बाहिर निकाले । एडीसी अघिल्तिरकै सिटमा बसे ।
२०७१ मंसिर ९ गते, मंगलवार ०९:०९:२५ बजे
टिभी हेर्‍यो नेता देखाउँछ,
रेडियो सुन्यो नेता कराउँछ
छापा सबले नेता पढाउँ छ,
जनमानसमा नेता छाउँछ।
२०७१ मंसिर ९ गते, मंगलवार ०९:०५:४१ बजे
उसलाई आजकल यो सहर प्रत्येक दिन नौलो लाग्न थालेको छ। कति धेरै काम भएको! प्रत्येक दिन भित्तामा सार्कको छाप देखिन्छ। अनि आउन लागेका मोदीको आधिपत्य पनि । विचरा कलिलो ऊ कसरी वुझोस् यी कुरा, मात्र कुदिरहेको गाडीको ढोकावाट हेर्छ ऊ बदलिँदै गरेको सहर। प्रत्येक दिन नयाँ देखिँदै गरेको सहर। नगरवधु जस्तै सिंगारिएको सहर।
२०७१ मंसिर २ गते, मंगलवार १०:४१:३६ बजे
तिर्खालु ती अधरहरु